Sankt Martin Sheet mimhanzi uye nhete kubva kumanyorera rhyme yekudhinda
Rwiyo rweMartin rwiyo - rugwaro
Muchikwata ichi, vanhu vanofambidzana naSt. Martin wakamira. Vadzidzi vanoimba Martinslieder uye vanoendeswa nemapoka.
akatasva nechando nemhepo,
bhiza rake rakamutakura nokukurumidza.
Saint Martin aifamba neushingi nyore
nguvo yake inomufukidza achidziya uye zvakanaka.Agara muchando, agere muchando,
kwaiva nemunhu murombo muchando,
vakanga vasina nguo, vaiva nezvipfeko.
Haiwa, ndibatsirei pakutambudzika kwangu,
kana zvisinei, chishuvo chinotyisa ndicho rufu rwangu.
Saint Martin akatora mawere mukati,
bhiza rake rakamira nemunhu murombo,
Saint Martin aine mimwe mikota
Saint Martin wakapa hafu,
mupemhi anoda kumutenda nokukurumidza.
Asi Saint Martin aifamba achikurumidza
kure nejasi rake chikamu.
Saint Martin anozviisa pakuzorora
Mukurota uku Ishe anopinda.
Anopfeka jasi semupfeko
chiso chake chinopenya chakanaka.Sankt Martin, Saint Martin,
Saint Martin anotarisa kwaari achishamisika
Ishe anomuratidza nzira.
Anomutumira kukereke yake,
uye Martin anoda kuva mudzidzi wake.
Saint Martin akazova muprista
izvo zvichida zvinomukomberedza kumakuva,
pakupedzisira akatakura crosier.
Mutsvene Martin, o iwe munhu waMwari,
ikozvino inzwa kuteterera kwedu
O tinyengeterere kwatiri munguva ino
uye kutitungamirira kuropafadzo.
Vhura mupepeti mimhanzi yerwiyo rweSankt Martin sefaira
Sankt Martin Fest - Customs asi achiri mazuva ano